Etu ị ga - esi họrọ Sistem Njikwa Ọdịmma kacha mma (CMS) | ECommerce ozi ọma
Etu ị ga - esi họrọ Sistem Njikwa Ọdịmma kacha mma (CMS)
Susana Maria Urbano Mateos | | SEO, Nkuzi na akuru
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị weebụsaịtị, họrọ nke kacha mma Ọdịnaya Nchịkwa (CMS), ọ dị mkpa ịkwado ezigbo ahụmịhe onye ọrụ. Ya mere, n'okpuru anyị na-ekekọrịta ụfọdụ nkwanye maka ịhọrọ CMS kachasị mma.
Otu n'ime ihe mbụ ị ga-atụle bụ na a sistemụ njikwa ọdịnaya okwesiri ikwe ka nmekorita di na ya ritere uru. Nkọwapụta dịgasị iche dabere na mkpa na ihe ndị zụrụ ahịa, agbanyeghị, lekwasị anya na ihe dịka nkwado, nkwụsi ike, obodo, na ilekwasị anya.
Otu ihe dị oke mkpa nke ekwesighi ileghara anya gbasara mkpali ị nwere maka azụmaahịa ahụ. Tupu ị na-ekpebi na otu software ma ọ bụ ọzọ, ọ bụ ihe amamihe nyochaa mkpa weebụsaịtị. Cheta na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-achọ atụmatụ pụrụ iche nke blọgụ nkeonwe ma ọ bụ weebụsaịtị ọdịnala anaghị achọ. Site na ịghọta mkpa ndị a, ị nwekwara ike nweta ọtụtụ ihe n’elu ikpo okwu.
N'ikwu okwu banyere nhọrọ dịnụ, enweghị obi abụọ na WordPress bụ usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu, ma ọ bụghị naanị ya dị. Achọpụtakwala ya Drupal, Joomla, SharePoint, Sitecore, Kentico, n'etiti ndị ọzọ. Ihe dị mkpa ebe a bụ ịtụle atụmatụ na ọrụ nke sistemụ nke ọ bụla na-enye karịa ịtụkwasị uche na ọnụahịa ahụ.
Iji jide n'aka na ị bụ ịhọrọ CMS kacha mma, anyị ga-atụle na ikpo okwu nke mmasị anyị gụnyere ọkwa kachasị mma nke akpaaka, igodo na njikwa njikọ. Nkwado maka akwụkwọ na faịlụ multimedia, ya bụ, ụdị ụdị a ga-ebugo, ohere iji jikwaa ihe oyiyi, akwụkwọ, vidiyo, wdg.
Echefukwala na CMS kachasị mma ga-enwerịrị ike ọchụchọ magburu onwe ya, ịbụ SEO enyi na enyi maka ogo njin ọchụchọ, nkwado maka ikike na njirimara onye ọrụ, gbakwunyere nkwado ọtụtụ asụsụ, yana ikike ịlaghachi ngwa ngwa na peeji nke gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEO » Etu ị ga - esi họrọ Sistem Njikwa Ọdịmma kacha mma (CMS)
Payoneer; uwa ugwo ikpo okwu
Pịa, analysis ngwá ọrụ gị Ecommerce